Bit By Bit - အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း Creating - 5.3.3 ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်
မူပိုင်ခွင့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးတစ်ခက်အလုပ်ရှိသည်။ သူတို့ကအသစ်သောတီထွင်မှုများ terse, lawyerly ဖော်ပြချက်ခံယူနှင့်ဖော်ပြထားသောတီထွင်မှုလျှင်ထို့နောက်ဆုံးဖြတ်ရမယ် "ဝတ္ထု။ " ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအရင်ကဒီတီထွင်မှု-သောဆပ်မယ်လို့၏ဗားရှင်းဖော်ပြထား -a "ကြိုတင်အနုပညာ" ရှိလျှင်, စစျဆေးသူဆုံးဖြတ်ရမယ် အဆိုပြုထားသောမူပိုင်ခွင့်မမှန်ကန်တဲ့။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်မှ, ရဲ့ဆွစ်ဇာလန်မူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့၌မိမိက start တယ်သူကိုအဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အဲလ်ဘတ်အမည်ရှိမူပိုင်ခွင့်စစျဆေး, ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။ အဲလ်ဘတ်ကိုအမေရိကန်မူပိုင်ခွင့် 20070118658a"ကိုအသုံးပြုသူ-selection စီမံခန့်ခွဲမှုသတိပေးချက်ပုံစံ" ကို Hewlett Packard တို့ကတင်သွင်းဗက် Noveck ရဲ့စာအုပ်ဝီကီအစိုးရအတွက်ကျယ်ပြန့်ဖော်ပြထားလိုလျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိနိုင်ကြောင်း (2009) ။ ဤတွင်လျှောက်လွှာကနေပထမဦးဆုံးပြောဆိုချက်ကိုင်:
ဒီမူပိုင်ခွင့်မှအဲလ်ဘတ်ဆုကို 20 နှစ်အရွယ်လက်ဝါးကြီးအုပ်အခွင့်အရေးများသင့်သို့မဟုတ်ကြိုတင်အနုပညာရှိခဲ့သည်? များစွာသောမူပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်လောင်းကြေးမြင့်မားသော်လည်း, ကံမကောင်း, အဲလ်ဘတ်ကသူလိုအပ်အံ့သောငှါသတင်းအချက်အလက်အများကြီးမရှိဘဲဤဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ သောကြောင့်မူပိုင်ခွင့်များကြီးမား backlog ၏, အဲလ်ဘတ်ပြင်းထန်သောအချိန်ဖိအားအောက်မှာအလုပ်လုပ်နှင့်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အလုပ်ကသာနာရီ 20 ပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ရပေမည်။ ထို့ပြင်ကြောင့်အဆိုပြုထားတီထွင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, အဲလ်ဘတ်အပြင်ဘက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူတိုင်ပင်ဖို့ခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ် (Noveck 2006) ။
ဒီအခြေအနေကိုလုံးဝကျိုးအဖြစ်ဥပဒေပါမောက္ခဗက် Noveck လုပ်ကြံလေ၏။ မူပိုင်ခွင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စနစ်ဟုခေါ်တွင်ကြောင်း: "တစ်ဦးကကြိုးနှံအဆိုပြုချက် peer-to-မူပိုင်ခွင့်" 2005 ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဝီကီပီးဒီးယားနေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်မှုတ်သွင်းသူမကအမည်ရဘလော့ post ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာရုံးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော IBM ကအဖြစ်ဦးဆောင်သည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးနောက် peer-to-မူပိုင်ခွင့်ဇွန်လ 2007 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တစ်ဦးက 200 နီးပါးနှစ်အရွယ်အစိုးရမဟုတ်သောဗျူရိုကရေစီနှင့်ရှေ့နေများ၏အုပ်စုတစုကိုရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ရာအရပျနဲ့တူပုံရသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပေမယ့်ရွယ်တူချင်း-to-မူပိုင်ခွင့်ကိုလူတိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားဟန်ချက်ညီတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲ။
5.9 ပုံ: peer-to-မူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ။ ကနေပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Bestor and Hamp (2010) ။
ဒီနေရာတွင်က (ပုံ 5.9) ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ တစ်ဦးတီထွင်သူသူမ၏လျှောက်လွှာ (သူမခဏ၌ပြုအံ့အဘယ်ကြောင့်ပိုမို) အသိုင်းအဝိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖြတ်သန်းသွားရှိသည်ဖို့သဘောတူပြီးနောက်လျှောက်လွှာ website တစ်ခုမှ posted ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနောက်လျှောက်လွှာ (သူတို့ခဏတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်အပေါ်ကိုထပ်ပို) အသိုင်းအဝိုင်းသုံးသပ်ရေးဆွေးနွေးသည်, ဖြစ်နိုင်သမျှကြိုတင်အနုပညာဥပမာ, တည်ရှိသောမှတ်ချက်တွေနှင့် website တစ်ခုမှအပ်လုဒ်လုပ်ထားကြပါတယ်။ ဒါကဆွေးနွေးမှု၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်, သုတေသနနှင့်အပ်လုဒ်တင်ပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက်မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးဖို့စေလွှတ်သောသံသယကြိုတင်အနုပညာရဲ့ထိပ် 10 ကိုအပိုင်းပိုင်းကိုရွေးဖို့, နောက်ဆုံးမှာမှီတိုင်အောင်, သုံးသပ်ရေးမဲရပ်ရွာနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်စစျဆေးထို့နောက်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုလုပ် မှစ. peer-to-မူပိုင်ခွင့်အတွက် input ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်တရားသဖြင့်စီရင်ပြန်ဆို။
ရဲ့တစ်ဦးအမေရိကန်မူပိုင်ခွင့် 20070118658 သို့ပြန်လာစေ "အသုံးပြုသူ-selection စီမံခန့်ခွဲမှုသတိပေးချက် format နဲ့။ " ဒီမူပိုင်ခွင့် Peer-to-မူပိုင်ခွင့်ကြောင့်စတိဗ် Pearson, IBM ကအဘို့အအကြီးတန်းဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ရှိရာ 2007 ခုနှစ်ဇွန်လများတွင်တင်ထားသောခဲ့သည်။ Pearson သုတေသန၏ဤဧရိယာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ကြိုတင်အနုပညာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖော်ထုတ်: နှစ်နှစ်အစောပိုင်းကထုတ်ဝေခဲ့: "လျင်မြန်စွာကိုးကားစရာလမ်းညွှန် Active ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ" ခေါင်းစဉ် Intel ကနေကို manual ။ ဤစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်ကအခြားကြိုတင်အနုပညာနှင့်ရွယ်တူချင်း-to-မူပိုင်ခွင့်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှဆွေးနွေးမှုနှင့်အတူလက်နက်ပါ, မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးမှု၏စေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာမူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာကိုထုတ်ပစ်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ကြောင့် Intel ရဲ့လက်စွဲ၏ Pearson အားဖြင့်တည်ရှိသောခဲ့သည် (Noveck 2009) ။ peer-to-မူပိုင်ခွင့်ပြီးစီးခဲ့ပြီ 66 ဖြစ်ပွားမှုနီးပါး 30% peer-to-မူပိုင်ခွင့်မှတဆင့်တွေ့ရှိခဲ့ကြိုတင်အနုပညာအပေါ်အခြေခံပြီးအဓိကအားပယ်ချခဲ့ကြ (Bestor and Hamp 2010) ။
အဘယ်အရာကို peer-to-မူပိုင်ခွင့်၏ဒီဇိုင်းအထူးသဖြင့်ကြော့စေသည်ကြောင့်အတူတူအားလုံးကခုန်ဖို့အများကြီးကွဲလွဲအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူရရှိသွားတဲ့သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူပိုင်ရုံးပိုမိုလျင်မြန်စွာရိုးရာ, လြှို့ဝှကျခပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သွားမူပိုင်ခွင့်ထက် peer-to-မူပိုင်ခွင့် applications များသုံးသပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တီထွင်သူပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မက်လုံးပေးရှိသည်။ သုံးသပ်ရေးမကောင်းတဲ့မူပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မက်လုံးပေးရှိသည်, အများကြီးပျော်စရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှာဖွေပုံရသည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုသာ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုတိုးတက်စေနိုင်သောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်မူပိုင်ရုံးနှင့်မူပိုင်ခွင့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မက်လုံးပေးရှိသည်။ ရပ်ရွာပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကြိုတင်အနုပညာရဲ့ 10 အကူအညီမရပါအပိုင်းပိုင်းကိုတွေ့လျှင်အကြောင်း, ဤအကူအညီမရပါဖဲ့မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးခွငျးအားဖွငျ့လျစ်လျူရှုထားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ရွယ်တူချင်း-to-မူပိုင်ခွင့်များနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်မယ့်မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူကဲ့သို့ကောင်းသောသို့မဟုတ်အထီးကျန်မှုတွေအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ပွင့်လင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအမြဲကျွမ်းကျင်သူများကိုအစားထိုးမထင်သော်လည်း, တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကျွမ်းကျင်သူများကပိုကောင်းသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပျကိုကူညီပေးပါတယ်။
peer-to-မူပိုင်ခွင့်အတွက် Netflix နဲ့ဆုနှင့် Foldit ထက်ကွဲပြားခြားနားသောပုံပေါက်နိုင်ပေမဲ့, ကဖြေရှင်းချက်ထဲမှာအလားတူဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ် generate ထက်စစ်ဆေးဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကလက်စွဲ "Active စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ: လျင်မြန်စွာကိုးကားစရာလမ်းညွှန်" ကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကအနည်းဆုံး-မှဤစာရွက်စာတမ်းကြိုတင်အနုပညာကြောင်း verify, အတော်လေးလွယ်ကူ-များအတွက်မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောထိုလက်စွဲစာအုပ်ရှာဖွေတာအတော်လေးခက်ခဲသည်။ Peer-to-မူပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပွင့်လင်းခေါ်ဆိုခစီမံကိန်းများကိုပင်သိသာအရေအတွက်မှအာမင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြဿနာများအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။